လုပ်သား ဖူလုံရေးငွေ အလွဲသုံးစားပြုသည့် လုပ်ငန်းရှင် သုံးဦးကို တရားစွဲမည် - Yangon Media Group
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၃ဝ
အလုပ်သမားများ၏ ဖူလုံရေးထည့်ဝင်ငွေကို ဌာနသို့ပေးသွင်းခြင်းမရှိဘဲ အလွဲသုံးစားပြုသည့် လုပ်ငန်းရှင်သုံးဦးကို တရားစွဲဆိုရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းသိရသည်။ ယင်းလုပ်ငန်းရှင်သုံးဦးသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှပင်ဖြစ် ပြီး အလုပ်ရှင်၏ထည့်ဝင်ငွေသုံးရာခိုင်နှုန်းကိုထည့်သွင်းရန်ပျက်ကွက်သည့်အပြင် အလုပ်သမားများ၏ ထည့်ဝင်ငွေနှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုပါ ဌာနသို့ပေးသွင်းခြင်းမရှိသည့်အတွက် လူမှုဖူလုံရေးဥပဒေအရ တရားစွဲဆိုနိုင်ရေး ဆောင်ရွက်နေကြောင်း လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ ထံမှ ဧပြီ ၃ဝရက်က သိရသည်။
”ထည့်ဝင်ကြေးသွင်းဖို့ပျက်ကွက်တဲ့အလုပ်ရှင်တွေ အတော်များတယ်။ အခုတရားစွဲဆိုတာက လုံးဝညှိလို့မရတဲ့ လုပ်ငန်းရှင် သုံးဦးကို တရားစွဲဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာပါ။ အဲဒီသုံးဦးရဲ့ ဌာနကို ပေးသွင်းဖို့ ပျက်ကွက်ငွေက စိစစ်နေတယ်ပေါ့နော်။ ခန့်မှန်းဆိုရင် ကျပ်သိန်း ၂၇ဝဝ ဝန်းကျင်လောက်တော့ရှိမယ်”ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမောင်မောင်အေးက ပြောသည်။ နိုင်ငံတော်၏မူအရ ကြွေးကျန်မရှိရေးဆောင်ရွက်ရန် ဦးတည်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကြွေးကျန်များကိုရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယခုလုပ်ငန်းရှင်သုံးဦးအပြင် ထည့်ဝင်ကြေးပေး ရန်ကျန်ရှိနေသည့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုမူ သတ်မှတ်ကာလထိ စောင့်ဆိုင်း၍ ဖူလုံရေးရုံးချုပ်အနေဖြင့် ညှိနှိုင်းခြင်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း၊ အသိပညာပေးမှုများလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကာ နောက်ဆုံး မပေးနိုင်ဟုဆိုလာပါက တရားဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်သွားရမည်သာဖြစ် ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
”တချို့အလုပ်ရှင်တွေက ခေါင်းပုံဖြတ်တယ်။ ကိုယ့်ဆီမှာ အလုပ်သမား ၁ဝဝ ရှိတာကို ၁ဝဝ လုံးမပြဘဲ ၅ဝ လောက်ပဲပြပြီး တော့ ကျန် ၅ဝ လောက်ကသွင်းရမှန်းမသိဘူး။ အဲဒီလိုမျိုး ခေါင်း ပုံဖြတ်တာတစ်မျိုး၊ အလုပ်သမား ၁ဝဝ လုံးစီကပိုက်ဆံကောက်ပြီး အပြည့်မသွင်းဘူး။ ၅ဝ လောက်ပဲ သွင်းတာမျိုးကတစ်မျိုး။ အဲဒီလို မျိုးစစ်ဆေးတွေ့ရှိရင် အလုပ်ရှင်က အဲဒီလိုလုပ်ရင်ပုဒ်မ ၄၂ဝ ပဲ။ လိမ်တာပဲ။ အရေးယူမယ်။ နောက်တစ်ခုက အလုပ်သမားက ကိုယ်တိုင်သွင်းရမှာကိုမသွင်းရင်လည်းတာဝန်ရှိတယ်။ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်ရင်ချိုးဖောက်သလို အရေးယူခံရမှာဖြစ်တယ်”ဟု ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။ အထက်ပါဖြစ်ရပ်များအပြင် ထည့်ဝင်ကြေးမပေးသွင်းသည့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများစွာကျန်ရှိနေပြီး ဖူလုံရေးကြေးမထည့်ဝင်ထားသည့် လုပ်ငန်းများအတွင်း လုပ်သားထိခိုက်မှုရှိသည်ဟု တိုင်ကြားလာပါက အလုပ်သမားအကျိုးခံစားခွင့်နှင့် ထည့်ဝင်ကြေးငွေကို ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် အလုပ်ရှင်ကပေးလျော်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကိုယ့်အတွက် ကာရိုက်တာက အရမ်းအရေးကြီးတယ်၊ အနုပညာကြေးက အရေးမကြီးဘူး - လိုင်လာခန်း
ထိုင်းမြောက်ပိုင်း သစ်တောအတွင်း ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ ဆောက်လုပ်မှု ချင်းမိုင်မြို့ခံများ ဆန္ဒပြ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စာကြည့်တိုက် ဥပဒေမူကြမ်းအပေါ် သုံးသပ်ပြီး တွေ့ရှိချက်များကို လွှတ်တော?
လက်ရှိ ပို့ကုန်ဈေးကွက်ကို ထိန်းသိမ်းပြီး ဈေးကွက်အသစ်များ ရှာဖွေ ထိုးဖောက်ရန် အစိုးရနှင??
Myanmar Idol Final ရောက် ဖြိုးမြတ်အောင်၏ ဟင်္သာတခေတ္တ အပြန်ခရီး ပြည်သူများ သောင်းသောင်းဖြဖြ ကြိုဆို
မြန်မာနေရှင်နယ် လိဂ်ပြိုင်ပွဲတွင် ထုတ်ပယ်၊ ဖျက်သိမ်းခဲ့သည့် အသင်းများ ရှိသော်လည်း ဇန်နဝါရ